Aqua feeds for Myanmar - De Heus
ကြက်စာ ၊ ဘဲစာ နှင့် ငုံးစာများ
ဘာ့ကြောင့် De Heus လဲ
ပင်မစာမျက်နှာ / တိရစ္ဆာန်အစာများ / ငါးမွေးမြူရေးအစာများ
De Heus Myanmar Ltd အနေဖြင့်ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အောက်ပါငါးမွေးမြူရေးအစာများကိုကျယ်ပြန့်စွာထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးပေးလျက်ရှိနေပါသည်။
Power Fingerling Fish Feed (ငါးမှုန်စာ)
Fish Starter and Grower Feed (ငါးသန်စာ)
Fish Finisher 1 and Fish Finisher2(ငါးကြီးစာ)
Pangasius Fish Feed (ငါးတန်စာ)
ကျွနု်ပ်တို့၏အရည်အသွေးကောင်းမွန်ထူးခြားသော ငါးစာများနှင့်အတူ ငါးမွေးမြူရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက သင့်အတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်စေမည့် အကြံဉာဏ်များနှင့်အကူအညီအထောက်အပံ့များကိုအစဉ်အမြဲထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိနေမှာဖြစ်သောကြောင့် သင့်ကန်ထဲကငါးများအတွက်အကောင်းဆုံးသော အကျိုးရလဒ်တွေကိုရရှိစေနိုင်မှာလည်းပဲဖြစ်ပါသည်။
ကျွနု်ပ်တို့၏ပညာရှင်များအနေဖြင့် ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်များကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်အတွက် အမြဲတမ်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေပါသည်။
၎င်းတို့အနေဖြင့် ငါးမွးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းစေဖို့အတွက် နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကြိုးစားလျက်ရှိနေပြီး အစာစားနှုန်းနှင့်အတူအသားတိုးနှုန်းစသည်တို့ကိုကောင်းမွန်စေအောင်လည်းကြိုးစားပေးနေမှာပဲဖြစ်ပါသည်။
အကောင်းဆုံးအကျိုးရလဒ်များကို ရရှိစေနိုင်ဖို့အတွက် ငါးမွေးမြူရေးဆိုင်ရာအသိပညာများ၊ ငါးအမျိုးအစားဆိုင်ရာဗဟုသုတများကို ကျွနု်ပ်တို့၏ Customers များအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးစားပေးထောက်ပံ့အကြံပေးလျက်ရှိနေတာလည်းပဲဖြစ်ပါသည်။
De Heus Myanmar Ltd is one of the leading Livestock and animal feeds company in Myanmar and offering the best animal feeds in Myanmar. We are also providing the appropriate advice, technical supports, and strong suggestions for the aqua farmers.
What is ESIA and IEE?
EIA Report for MTR
EIA Report for Aqua
© 2022 De Heus မှ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး | မြေပုံအညွှန်း| မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်| မှတ်တမ်းသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ
Welcome to our De Heus websites